नेकपा कार्यदलमा अझै भएन सहमति ! « Dhankuta Khabar
नेकपा कार्यदलमा अझै भएन सहमति !
प्रकाशित मिति : Feb 10, 2019
समय : 11:24 PM
काठमाडौँ, २७ माघ । चाँडो प्रतिवेदन बुझाउन ताकेता भए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तल्लो कमिटीको एकतासम्बन्धी कार्यदलमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले आज बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्षहरुबीच भेनेजुएलाका विषयमा कुनै विवाद नरहेको स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि शनिबार शीर्ष नेताबीचको संयम र पार्टी एकताको ऐतिहासिक अभिभारालाई योग्यतापूर्वक पूरा गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो ।